विद्वान्‌हरूले नेताहरूलाई सम्झाइदिनुपर्‍याे
मेरो नाम रेचल खड्का हो । मेराे नेपालघर काठमाडौं- ७, सिफलमा हाे । म अहिले बाबामामुसँग अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा बस्छु । यहीँको रुटी हिल पब्लिक स्कुलमा कक्षा ५ मा पढ्छु ।
नेपालमा हुँदा म बोर्डिङमा पढ्थेँ । सन् २०१६ मा बाबामामुसँगै अस्ट्रेलिया आएकी हुँ । सुरुमा म कोमली पार्क प्राइमरी स्कुलमा पढेँ । एक वर्षपछि हामी त्यहाँबाट सिड्नी आयौँ ।
कोभिडले हाम्राे स्कुल पनि केही दिन बन्द भयो । तर, अनलाइनबाट पढाइ चल्यो । यता त टेक्नोलोजीको धेरै नै प्रयोग गरिन्छ । सबैको हातहातमा ल्यापटप, आइप्याड, मोबाइल छ । जता पनि इन्टरनेट छ । त्यसैले केही समय अनलाइनबाटै पढ्यौँ । २३ जनवरीबाट स्कुल लाग्न थालेको छ । बालपत्रमा आज मैले अस्ट्रेलियालाई हेरेर नेपालबारे केही लेखेकी छु । यो लेख्दैगर्दा मलाई मेरी मामुले सघाउनुभएको छ । उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
अब मुख्य विषयतिर नै प्रवेश गरौँ ।
नेपालको स्कुल र यहाँको स्कुल त धेरै नै फरक लाग्यो । यहाँको पढाउने तरिका नै छुट्टै रहेछ । म छक्क परेकी छु, नेपालमा हुँदा एक वर्ष पढ्दा जति बुझ्थेँ, जान्दथेँ, अहिले यहाँ त्यति नै समयमा धेरै पढेँ, बुझेँजस्तो लाग्छ । तर, साथी त जे भए पनि नेपालकै नजिक लाग्ने । किनकि, सबै कुरा मिल्छ नि त । खेलौनाचाहिँ धेरै पाइन्छ यहाँ ।
कति सुन्दर मैले पढ्ने किताबका पाना
अस्ट्रेलिया मलाई राम्रो लाग्यो तर नेपालजति होइन । यहाँजस्तै वहाँ (नेपाल)को विकास हुने हो भने त सबैतिरबाट मान्छे नेपाल घुम्न जान्थे होलान् । हाम्रोमा माउन्ट एभरेस्ट छ । लर्ड बुद्धको जन्मभूमि हो नेपाल । अग्लाअग्ला हिमाल छन् । हरियो जंगल छ । सफा पानी छ । पहाडहरू छन् । ज्ञानी मान्छे छन् । हामीसँग धेरै थोक छ । तर, विकास छैन । त्यसैले नेपाललाई गरिब भन्छन् । कसैले यसो भनेको सुन्दा मलाई कस्तो नराम्रो लाग्छ ! जहाँ यति राम्रा र सुन्दर चीज छन्, त्यो देश कसरी गरिब हुन्छ ? तर, मेरी मामु भन्नुहुन्छ, 'प्राकृतिक रूपमा नेपाल साँच्चै धनी छ । हामीले यसमा गौरव गर्नुपर्छ ।'
कसैले नेपालमा के छ भनेर सोधे भने म माउन्ट एभरेस्ट र बुद्धको बारेमा भन्न छुटाउँदिनँ । अस्ट्रेलियामा सबै थोक भएर पनि हाम्रो नेपालमा जति छैन । त्यसैले मलाई नेपाली हुनुमा गर्व छ । अस्ट्रेलियामा पढेका कुरा म नेपाल गएर लागू गर्नेछु ।
भाेलिदेखि स्कुल ड्रेसमा जानुपर्ने रे, मेरो त युनिफर्म पनि छैन
नेपाली गाउँहरूका मजस्तै सानासाना साथीले पढ्न पाउने गरी स्कुल खोल्नेछु । सबै शिक्षित भए भने कोही खाली बस्नुपर्दैन । सबैले जागिर पाउँछन् । अनि सबैले काम गरे भने देश त विकास भइहाल्छ नि ! त्यसैले शिक्षालाई नेताज्यूहरूले सुधारिदिनुपर्छ । शिक्षितहरू, जो नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नेताज्यूहरूलाई यो कुरा भनिदिनुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ । समुद्रको फिटेको पानी खाएकाहरूले प्रगति गर्न सक्छन् भने हिमालबाट खसेको सङ्लाे पानी खाएका हामी नेपालीले किन सक्दैनौँ ?
(शिलापत्रमा हरेक शनिबार प्रकाशित हुने बालपत्र स्तम्भका लागि [email protected] मा लेख, रचना पठाउन सकिनेछ । साथमा फोटाेका साथै ठेगाना, विद्यालयकाे नाम, कक्षाबारे जानकारी खुलाएको हुनुपर्नेछ ।)
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १७, २०७७, ०७:३०:००